Wasiir Dubbe oo sheegay in shirka lagu qaban doono Xerada Afisyooni | Dhacdo
Home Wararka Maanta Wasiir Dubbe oo sheegay in shirka lagu qaban doono Xerada Afisyooni
Wasiir Dubbe oo sheegay in shirka lagu qaban doono Xerada Afisyooni
Wasiirka Warfaafinta Somaliya, Cismaan Abokar Dubbe oo goor dhow shir jaraa’id ku qabtay Magaalada Muqdisho ayaa kaga hadlay saddex qodob, oo kala ah arrimaha doorashooyinka, xaaladda COVID-19 ee dalka iyo dacwadda xudeed badeedka ee Somaliya kala dhaxeysa Kenya.
Wasiirka ayaa sheegay in 22-ka bishan shir u dhaxeeya Madaxda Dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir uu ka furmi doono Magaalada Muqdisho, kaasoo lagu dhameystirayo heshiisyadii ay horey u wada gaareen.
Wasiirka ayaa sheegay shirka oo socon doono maalmaha Isniinta iyo Talaadada in lagu qaban doono Xerada Afisyooni, oo ku barbar taala Garoonka Diyaaradaha ee Aadan Cadde. Tani waxay ka mid ahayd shuruudihii Maamulada Puntland iyo Jubbaland dalbanayeen, ee ahayd in shirka lagu qabto goob amnigeeda lagu kalsoon yahay.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in ajandayaasha shirka uu noqon doono waxyaabihii ka soo baxay shirarkii ay Baydhabo iyo Muqdisho ku yeesheen Guddiyadi Farsamada, ee loo xilsaaray inay ka soo tala bixiyaan doodihii ka dhashay heshiiskii 17-kii September.
Wasiirka ayaa xusay in shirkii ugu dambeeyay ay Guddiga Farsamada toddobaadkan ku yeesheen Hotel Decale lagu heshiiyay ajandayaasha shirka, sida uu yiri, inkastoo la fahamsan yahay inaanay shirkaasi ka qaybgelin Xubnihii Jubbaland iyo Puntland.
Wasiir Dubbe ayaa intaa ku daray in shirka lagu qabanayo Xerada Afisyooni uu horkici doono Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda, Maxamed Xuseen Rooble, isagoo intaa ku daray in waqtigan wixii ka dambeeyaa uu dalka doorasho aadi doono.
Dhanka kale Wasiir Dubbe ayaa weeraray Madasha Badbaado Qaran, oo Khamiistii looga dhawaaqay Magaalada Muqdisho, waxaana uu ku sheegay isbahaysi doorasho-diid ah, sida uu yiri.
Madashan ayaa waxaa ku mideysan Maamulada Puntland, Jubbaland, Midowga Musharaxiinta iyo Golaha Siyaasiyiinta ee Somaliland.
Dowladda Somaliya ayaa sida muuqata ka tanaasushay shirkaasi, oo ay dooneysay in lagu qabto Aqalka Villa Somalia, waxaana la rumeysan yahay in ay ku timid cadaadis dhanka caalamka ah.
Previous articleDowladda oo maalintii 2aad ciidamo geysay Degmada Doolow (SAWIRRO)
Next article38 qof oo COVID-19 ugu geeriyooday Degmada Caabudwaaq